Northern Pacific Airways ga -efe ụgbọ elu Boeing ọhụrụ n'etiti US na Eshia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Northern Pacific Airways ga -efe ụgbọ elu Boeing ọhụrụ n'etiti US na Eshia
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Nweta Boeing 757-200s bụ nzọụkwụ mbụ na atụmatụ azụmaahịa nke North Pacific. Tupu ịbanye ọrụ, ụgbọ elu ahụ ga-enyocha nyocha mmezi ọkwa C zuru oke site na Certified Aviation Services LLC (CAS), onye isi na-ahụ maka mmezi, ndozi na nrụzigharị (MRO) na San Bernardino, California. Ụgbọ njem nọ na Alaska na-ezube ịnọgide na-agbasawanye ụgbọ mmiri ya ka ọ na-akwado maka ụgbọ elu ndị njem.
Northern Pacific Airways kwenyere ịzụta ụgbọ elu isii mbụ Boeing 757-200.
Northern Pacific Airways dechara azụmahịa iji mezuo akụkụ nke ụgbọ mmiri mbụ ya chọrọ.
A ga-ebuga ụgbọelu ọhụrụ Boeing 757-200 ọhụrụ n'ime nzụta a na Northern Pacific Airways ozugbo,
N’izu a, Anchorage-based Northern Pacific Airways, onye nwe ya nke FLOAT Alaska LLC, kwetara ịzụrụ ụgbọ elu isii mbụ ya-Boeing 757-200s. Ụgbọ elu ahụ mezuru azụmahịa ahụ iji mezuo akụkụ nke ụgbọ mmiri mbụ ya chọrọ. A ga -enyefe ụgbọ elu mbụ n'ime nzụta a ozugbo.
Ụgbọ elu ahụ na -ezube ịnye ọrụ n'etiti isi ihe na US na Asia, site na Anchorage, Alaska.
Nweta Boeing 757-200s bụ nzọụkwụ mbụ na ya Northern PacificAtụmatụ azụmahịa. Tupu ịbanye ọrụ, ụgbọ elu ahụ ga-enyocha nyocha mmezi ọkwa C zuru oke site na Certified Aviation Services LLC (CAS), onye isi na-ahụ maka mmezi, ndozi na nrụzigharị (MRO) na San Bernardino, California. Ụgbọ njem nọ na Alaska na-ezube ịnọgide na-agbasawanye ụgbọ mmiri ya ka ọ na-akwado maka ụgbọ elu ndị njem.
Ihe kacha mma na klas Boeing 757-200 A na-akwado ya site na ejima 36-600 Rolls-Royce RB211 na-ebugharị injin turbo maka oke iwepụ nke 255,000 lbs. Ụgbọ elu ahụ nwere ike ibufe ihe karịrị mmadụ 200 n'ụgbọ elu nke ọ bụla, na-enwe 3,915nm/-7,250km kwa mmanụ. Ụgbọ elu nke nwere naanị otu ụzọ na-adị ọnụ ala iji efe karịa ndị ogbo ya nwere obosara, mana ọ nwere oke karịa ụgbọ elu ndị ọzọ nwere nha. N'ime ogologo oge mmemme ha, ewepụtara ihe karịrị 1,049 Boeing 757-200s. Ụgbọ elu ahụ dabara nke ọma maka ụgbọ elu na-aga ebe, ruo ogologo oge, ma nwee ohere zuru oke ịnabata ihe onye njem ọ bụla ga-ebu.
"Northern Pacific dị mpako iwebata ụgbọ elu ndị a siri ike dịka ntọala nke ụgbọ mmiri anyị, ”ka Rob McKinney, onye isi ndị isi na Northern Pacific kwuru. “Ndị Boeing 757-200 ga -enyere anyị aka ịchekwa ego na arụmọrụ dị mma mgbe anyị na -enye ndị ahịa anyị ahụmịhe njem na -akwụghachi ụgwọ. ”
Northern Pacific Airways (NP) na -ezube ịnye ụgbọ elu n'etiti isi ihe na US na isi na East Asia site na ijikọ site na ọdụ ụgbọ elu Ted Stevens na Anchorage, Alaska.
FLOAT Alaska LLC, nke onye isi Rob McKinney bụ onye isi, bụ ụlọ ọrụ nne na nna nke Ravn Alaska, Northern Pacific Airways, FlyCoin, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dabere na Alaska.